Izindlu ezincinci kwiBon Echo's Edge, kwiCottage #3
UDean unezimvo eziyi-43 zezinye iindawo.
Iimbono ezimangalisayo zeMazinaw Lake. Igumbi eliphambili elinekhitshi, ifriji, isitovu, itafile, izitulo kunye nomatshini wekofu. Ngaphandle fumana indawo yakho yepikiniki, kunye ne-propane BBQ. Iinkuni zibonelelwa kwindawo ekwabelwana ngayo imingxuma yomlilo. Umpompo wamanzi kwi-cottage u-UV uyahluzwa kwaye uyaphathwa. Izindlu zangasese ezicocekileyo kwisakhiwo esahlukileyo esiziimitha ezingama-20 ukusuka kwindlwana, enamanzi ashushu nabandayo, ahambayo, ekwabelwana ngawo namanye amagumbi. (Ukusetyenziswa kosapho olunye ngexesha le-COVID) Ukudlula kosuku lwePaki yePhondo yaseBon Echo iyafumaneka ukuba uyiboleke.
Silusapho olunosapho, indawo yokuya ekhefini ejolise kusapho. I-Cottages e-Bon Echo's Edge ifakwe kwindawo yangasese kunye neenyawo ze-350 ze-pristine, i-crystal ecacileyo, i-waterfront kwi-Lake yaseMazinaw emangalisayo. Sihamba nje ngemizuzu emihlanu ukuya eBon Echo Provincial Park kwaye sinendawo yokupasa yosuku ekhoyo ukuze siyiboleke! Singakunika kunye neendwendwe zakho indawo efanelekileyo yokuhlangana phakathi kwe-Ottawa neToronto, iKingston kunye nePembroke. Izinto zangoku kukuhamba ngemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya eCloyne okanye eNorthbrook, eOntario. I-cottage nganye iza nendawo yayo yepikiniki kunye nemibono ye-panoramic yechibi. Sinephenyane, iikayaks, isikhephe esihamba ngeenyawo, indawo yokuqubha ebukekayo kunye nebhon yomlilo ejonge emanzini ukuze uyonwabele ehlotyeni. Ezi kwabelwana ngazo nezinye iindwendwe kwisiza. Ebusika, zipholele emlilweni kwiNkosana yethu ePhambili, betha iindledlana eziphathwayo zekhephu, hamba uyoloba emkhenkceni, okanye uzihlangule kwikhephu!
Sisoloko silapha kwaye siyakuvuyela ukunceda. I-ofisi yethu yokurenta imi ngaphaya kwendlela.